Umbulali Obulawe Ngamaxhoba okanye Ukuxhatshazwa Kokuphathwa kakubi?
U-Jodi Arias wabanjwa ngoJulayi 15, 2008, waza wahlawuliswa ngokudubula nokugwaza wakhe umfana, owayeneminyaka engama-30 ubudala, uTravis Alexander, emzini wakhe eMeza, eArizona. UArias wamangalelwa enetyala, ebiza ukuba wabulala uAlexander ngokuzikhusela.
UJodi Ann Arias wazalelwa eSalinas, eCalifornia, ngoJulayi 9, 1980, kuWilliam Angelo noSandy D. Arias. Unabantwana abantakwabo abane: udadewabo omdala omncinane, abazalwana abancinci kunye nodade.
Ukususela kwiminyaka eyi-10, i-Arias ibonise umdla kwimifanekiso eqhubekayo ebomini bakhe abadala. Ubuntwana bakhe beminyaka engabonakaliyo, nangona kunjalo, uthe yena ungumntwana ophathwe kakubi, esithi abazali bakhe bambethe ngeenkuni zokhuni kunye nebhanti. Ukuxhatshazwa ngokusobala kwaqala xa wayeneminyaka eli-7 ubudala.
I-Arias iphume kwi-Yreka Union High School ngebanga le-11. Waqhubeka ephandle inzala yakhe kwizithombe zobungcali ngenkathi esebenza kwimisebenzi eyahlukeneyo yexeshana.
Ngethuba lokuwa kwe-2001, i-Arias yaqala ukusebenza njengomncedisi kwivenkile yokudlela e-Ventana Inn kunye ne-Spa eCarmel, eCalifornia. UDarryl Brewer, owayengumphathi wokutya kunye newayini, wayenomsebenzi wokuqesha kunye nokuqeqesha abasebenzi beevenkile.
Bobabini iArias neBrewer bahlala kwizindlu zabasebenzi kwaye ngoJanuwari 2003, baqala ukutshata. Ngelo xesha uArias wayeneminyaka engama-21 kwaye uBrewer wayeneminyaka engama-40. Baye basebenzelana ngesondo ngaphambi kokuba baqale ngokusemthethweni.
UBerwer wathi elo xesha, uArias wayengumntu onoxanduva, onomdla nothando.
Ngo-Meyi 2005, uArias noBrewer bathenga ikhaya ndawonye ePalm Desert, eCalifornia. Isivumelwano kukuba ngamnye uya kuba noxanduva lokuhlawula isigqibo semali yokuboleka imali ye-$ 2008 ngenyanga.
NgoFebruwari 2006, uJodi waqala ukusebenza nge-Prepaid Legal, ngelixa egcina umsebenzi wakhe we-server kwi-Ventana.
Waqala ukubandakanyeka neCawa yeMormon. Waqala ukuba neendwendwe ekhaya ayenokholo lweMormon kwiinkalo zeBhayibhile kunye neeseshoni zomthandazo.
Ngomhla ka-Meyi 2006, uJodi watshela uBerwer ukuba akafunanga ukuba nobuhlobo bokwenyama naye kuba wayefuna ukwenza oko wayefundiswa ecaweni aze azigcinele indoda yakhe yesikhathi esizayo. Kwakhona kwangexesha elifanayo ukuba wanquma ukuba nezibilini zebele.
Ngokutsho kweBrewer, ebudeni bonyaka ka-2006, uJodi uqalise ukutshintsha njengoko ukubandakanyeka kwakhe kwi-Prepaid Legal kwanda. Waba ngumntu ongenakutyala imali kwaye waqala ukusilela ekuxhaseni kwakhe uxanduva lwezemali, kubandakanywa neendleko zakhe zokuhlala.
Njengoko ubuhlobo buqala ukuhlahloka, uBrewer wenza amalungiselelo okufudukela eMonterrey ukuba abe kufuphi nomntwana wakhe. UJodi wayengazicwangcisi ukuhamba naye kwaye kwavunyelwene ukuba uya kuhlala endlwini aze athengiswe.
Ulwalamano lwabo lwaphela ngoDisemba 2006, nangona kunjalo, bahlala bengabangani kwaye bebambiza ngezinye izihlandlo. Kunyaka olandelayo indlu yangena ekungqinikeni.
UArias noTravis Alexander bahlangana ngoSeptemba 2006, eLas Vegas, eNevada , ngelixa beya kwiinkomfa zeNgxelo zeNkundla zeNgxowa-mali.
UAlesandria wayeneminyaka engama-30 kwaye wasebenza njengesithethi eshukumisayo kunye nommeli wokuthengisa we-Prepaid Legal.
U-Arias wayeneminyaka engama-28 kwaye wayehlala eYreka, eCalifornia, esebenza ekuthengiseni i-Prepaid Legal kwaye ezama ukuphuhlisa ishishini lakhe lokuzifotela. Kwakukho ukukhawulwa ngokukhawuleza phakathi kwababini kunye no-Arias, ubuhlobo baba nesondo emva kweveki emva kokudibana.
Ngeli xesha, uArias wayehlala eCalifornia kwaye uAlexandria wayese-Arizona. Baqala ukuhamba kunye namaqela amaninzi kwaye xa ukuhlukana kobudlelwane bekhulile nge-imeyile (ekugqibeleni ama-82,000 atshintshisana) kunye nokuthetha ndawonye kwifowuni imihla ngemihla.
NgoNovemba 26, 2006, u-Arias wabhaptizwa kwiCawa likaYesu Kristu weZiNgcwele zemihla yokugqibela ukuze, ngamazwi akhe, ukuba asondele kufuphi noAlexander owayengumMormoni ozinikeleyo. Kwiinyanga ezintathu kamva uAlexandria noArias baqala ukuthandana kunye kwaye basuka eCalifornia baya eMesa, eArizona, ukuba babe kufuphi noAlexander.
Ulwalamano lwaluhlala malunga neenyanga ezine, luphela ekupheleni kweJuni 2007, nangona baqhubeka belala ngesigxina. Ngokwa-Arias, ubuhlobo buphela ngenxa yokuba wayengamthembi uAlexander. Kamva waxela ukuba uAlexandro wayengumntu ongaphambuki ngokwesondo owamxhaphaza ngokwenyama nangokwezesondo kwaye wayefuna ukuba abe khoboka lakhe.
Emva kobudlelwane bephelile, uAlexandria waqala ukuthandana namanye amabhinqa kwaye wayekhalaza kubahlobo bakhe ukuba uArias wayenomona. Wayekrokrela ukuba wayeseyichitha amathaya akhe kabini kwaye wathumela esongela i-imeyli engaziwa kunye nowesifazane owayemthandana naye. Waphinda watshela abahlobo ukuba uArias wayenomkhumbi endlwini yakhe ngokusebenzisa inja emnyango xa elele.
Ngaphandle kwamabango okutshitshiswa , uAlexander noArias baqhubeka behamba kunye ngo-Matshi 2008 baza bagcina ubudlelwane babo ngokwesondo.
Ngokwe-Arias, wayenxinekile ngokuba ngumfana ka-Aleksandro eyimfihlo kwaye xa kufika ixesha lokuba athole enye indawo yokuhlala emva kokuba naye ohlala naye esatshatileyo, wanquma ukubuyela eCalifornia.
Ubungqina bubonisa ukuba emva kokuba uArias ashiye e-Arizona, ukuba abo babini baqhubeka bechitshanisa imiyalezo ye-intanethi kunye nemifanekiso.
Ngokutsho kwabahlobo baka-Aleksandro, ngoJuni 2008 wayenelisekile nge-Arias emva kokumtshutshisa kwi-akhawunti yakhe ye-Facebook kunye ne-akhawunti yebhanki. Utshilo wamxelela ukuba wayefuna ukuba ahlale ebomini bakhe ngonaphakade.
Ngokweerekhodi zamapolisa, ngoJuni 2, 2008, uArias wayiqeshisa imoto kwiBhajethi yeRhafu-ye-Car e-Redding, eCalifornia, yaza yaya eAlexander emzini waseMesa, apho bathatha khona imifanekiso yabo yokulala ngesondo kunye neentlobo ezahlukeneyo zesondo.
NgoJuni 4, uArias wabuyela eCalifornia waza wabuyisela imoto yokuqeshisela kwiRhafu-mali.
Abahlobo baka-Aleksander baxhalabele ngaye xa ephosakele intlanganiso ebalulekileyo kwaye ahluleka ukubonisa uhambo olucwangcisiweyo lwaseCancon, eMexico. Ngomhla ka-Juni 9, abahlobo bakhe ababini baya ekhaya baza bavusa omnye wahlala naye, owamgxeka uAlexandro wayedolophini. Emva koko wajonga igumbi lika-Aleksandriya elalivalelwe kwaye wamfumanisa efile phantsi kwesiteji sakhe sokuhlamba.
Ngokwe-autopsy kwacaciswa ukuba uAlexandro udutshulwe ebusweni, wahlabelela amaxesha angama-27 kwaye intamo yakhe yahlulwa.
Abaphenyi abasebenzisa ukubulala u-Aleksandro babenakho ukuqokelela ubungqina obuninzi bokubakho kokubulala. Oku kwakuquka ikhamera eyafunyanwa kumatshini wokuhlamba, okwakubonakala ngathi uhlambulukile.
Kwakunolwazi jikelele ukuba uAlexander wayekhulile echukunyiswa yi-Arias. Kwakuqala ukucetyiswa ukuba i-Arias ingabandakanyeka ekufeni kukaAlexander ngexesha lokubiza kuka-9-1-1 okwenziwe emva kokuba umzimba ka-Aleksander ufumaniswe. Abanye abahlobo kunye namalungu entsapho abadliwano-ndlebe nabacuphi bacebise ukuba amapolisa kufuneka athethe ii-Arias.
Iifoto ezifumanekayo kunye ne-DNA Iziphumo
UArias waqala ukubiza u-Esteban Flores owayengumphenyi owayephethe loo meko. Wabuza malunga neenkcukacha zokubulala waza wazinikela ekuncedeni uphando. Uthi wayengenalo ulwazi lolwaphulo-mthetho kwaye ekugqibeleni wayebone uAlexander ngo-Ephreli 2008.
Ngomhla ka-Juni ka-17, i-Arias yazivumela ukuba ibe yiminwe kunye ne-swabbed ye-DNA, njengoko kwenza amaninzi ka-Alexander.
Kwiintsuku ezimbini emva kokuba zifakwe eminwe, abaphenyi bambuza ngaye uchungechunge lwezithombe ezazifunyenwe kwimemori khadi yekhamera efunyenwe kumatshini wokuhlamba. Iifoto, eziye zatshintshwe ixesha ngoJuni 4, 2008, zabonisa imifanekiso ka-Aleksandria kwisitya, mhlawumbi imizuzu ngaphambi kokubulawa. Kwakukho nemifanekiso yakhe elele phantsi egazini.
Ezinye iifoto, eziye zacinywa kodwa zabuyiselwa, zaza zivela ku-Jodi, zazingabonakali kwaye zifunyanwe kwiindawo ezikhuselayo, nazo zatshintshwe ixesha ngexesha elifanayo. UArias waqhubeka efuna ukuba wayengambonanga uAlexander ukususela ngo-Apreli.
Kwiveki kamva iimvavanyo zebhabhatyibhile zibonise ukuba ukuprintwa kwegazi okufunyenwe kwimeko yokubulala kwakuqukethe i-DNA efana no-Arias no-Alexandre. Kwakukho ukufana kwe - DNA ku-Arias kwizinwele ezitholakala kwindawo.
Ngeeveki ezilandelayo, uAraas waya kwinkonzo yesikhumbuzo ku-Alexander, wabhala incwadi enomusa ku-ugogo wakhe, wahlela ukuba iintyatyambo zithunyelwe kwintsapho yakhe kwaye zithumele imiyalezo enothando malunga neTravis kwiphepha lam MySpace.
Ngomhla ka-Julayi 9, 2008, owawukuzalwa kuka-Arias, iJaji yaseJaliya enkulu yammangalela ngokubulala. Kwiintsuku ezintandathu kamva wabanjwa waza wahlawuliswa ngobulali lokuqala kwaye ngoSeptemba waxoshwa e-Arizona ukuba abhekane novavanyo.
Amanga kunye namaxoki amaninzi
Kwiintsuku nje emva kokuvalelwa eArizona, uJodi Arias wanikezela udliwano-ndlebe ne-Arizona Republic. Ngethuba lo dliwano-ndlebe, waxela ukuba wayengenacala kwaye wayengenanto enxulumene nokubulawa kukaAlexander. Akazange achaze isizathu sokuba i-DNA yakhe ifumaneke kwindawo yokubulala.
Kwiiveki ezimbalwa kamva, ngoSeptemba 24, 2008, umboniso wethelevishini, "U-Edited Inside" wabuya udliwano-ndlebe no-Arias, kodwa ngeli xesha wavuma ukuba wayekunye noAlexandro xa wabulawa kwaye ngaba ngababenzi ababini abazenzayo.
Wachaza ngakumbi malunga nokubulawa kwelinye illiwano-ndlebe "kwiiyure ezingama-48" ngoJuni 23, 2009. Wathi "wayemkhulula ngokumangalisayo" ngexesha ayelibiza ngokuba yi-home invasion. Ngokwebali lakhe, uAlexandria wayedlala ngekhamera yakhe entsha kwaye ngokukhawuleza wafumana elele esiteji sokuhlambela emva kokuva umvalo omkhulu.
Xa ekhangela phezulu wabona indoda kunye nomfazi, bobabini bembethe abamnyama, beza. Babethwele umsi kunye nompu. Uthe le ndoda yatshilo isibhamu kuye kwaye yakhupha i-trigger, kodwa akukho nto eyenzekayo. Wabe esebalekela ngaphandle kwendlu, ehamba noAlexander, kwaye akazange abuke emva.
Wachaza isizathu sakhe sokungabibizi ngamapolisa ngenxa yokuba wayeyika ubomi bakhe kwaye wayezenza ngathi akukho nto yenzeke. Ngokwesaba, wabuyela eCalifornia.
I sohlwayo lokufa
I-Attorney's County Attorney Office yachaza ulwaphulo-mthetho lukaJodi Arias ngokugqithisileyo, olucekisayo kwaye lwenziwa ngendlela ephosakeleyo kwaye lufuna isigwebo sokufa .
Kwiinyanga ngaphambi kokuba kuqulwe ityala , uArias watshela ijaji ukuba ufuna ukuzimela. Ijaji yavuma ukuba, ngokude kubekho umkhuseli woluntu okhoyo ngexesha lovavanyo.
Kwiiveki ezimbalwa emva koko, uArias uzame ukufumana iileta kubungqina bokuthi wayebhalwa nguAlexander. Kwileta, uAlexandro wavuma ukuba ngu-pedophile. Iileta zavanywa kwaye zafunyaniswa ukuba zenziwe. Kwiintsuku ezimbalwa zokufumanisa izinto, u-Arias watshela ijaji ukuba uphelele ngokusemthethweni intloko yakhe kunye nesiluleko sakhe somthetho sabuyiselwa.
Uvavanyo kunye neSigwebo
Icaleni malunga noJodi Arias laqala ngoJanuwari 2, 2013, kwiNkundla ePhakamileyo yaseMaricopa kunye neNhlonipho. USherry K. Stephens ophetheyo. Amagqwetha ase-Arias aqeshwe yinkundla, uL. Kirk Nurmi noJennifer Willmott, bathi iArias yabulala uAlexander ngokuzikhusela.
Ulingo lwasasazwa ngokukhawuleza kwaye lwafumaneka ngokukhawuleza kwihlabathi jikelele. U-Arias wasebenzisa iintsuku ezili-18 ezipheleleyo kwi-stand kwaye wakhuluma malunga nokuxhaphazwa ngabazali bakhe, iinkcukacha ezithandana naye malunga nobomi bakhe bobulili kunye noTravis Alexander waza wachaza indlela ubuhlobo babo bube besetyenziselwa ngayo ngokunyanzela nokuxhaphaza ngokwenyama.
Emva kokuxubusha ngeeyure ezingama-15, ijaji yafumana u-Arias unecala lokubulala. NgoMeyi 23, ngo-2013, ngexesha lesigwebo sokugweba , ijaji ayikwazanga ukufikelela kwisigqibo esifanayo. Inkundla yesibini yabanjwe ngo-Oktobha 20, 2014, kodwa nabo bebethunjelwe kwi-11-1 ukuze bafumane isigwebo sokufa . Okushiye isigwebo sokugweba ku-Stephens, nangona isigwebo sokufa sasisekho etafileni. Ngomhla ka-Apreli 13, 2013, uArias wagwetywa ejele ngaphandle kokubakho i-parole.
Okwangoku uhlala kwiComplex State Prison Complex - ePerryville kwaye uhlelwa njengengxowankulu ephakamileyo yobungozi 5 kwaye uhlala esiphezulu.
Umbulali oThotywe nguSharee Miller ukuya ku-Wed
Imfundo yabadala kwiDelaware
Uhlalutyo luka-Oliver's Evolution 'nguJohn Updike
I-Wet-Phuma kwiKayak yakho Nangona i-Downside Down
IYunivesithi yaseMichigan State, i-East Lansing Admissions
Imbali nelifa leProjekthi yeM Mercury
Turkey | Iinkcukacha kunye neMbali
Ubume be-Entebbe Raid
Kulula Ukwenza Umlilo Wombala Wombala Wombala Wombala Wombala Wombala Wombala Wombala Wombala Wombala Wombala Wombala Wombala Wombala Wombala Wombala Wom
Stryper - I-Biography ye-Christian Hard Rock Band Stryper
Iyini iRègles Range Rule?
I-Alaska yeBholeji yeeKholeji zeBhayibhile
AmaHighes of Faith kwiNcwadi yamaHebhere
Indlela yokubhala iItatimende zeZakhono zoBomi bemihla ngemihla: Ucoceko kunye nokuChobisa